Ego ole ka ndi ahia ole na ole jiri Social Media | Martech Zone
Etu ndi obere ulo oru jiri Social Media
Wednesday, May 2, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ na-atọ ụtọ mgbe niile ịchọta ndị ahịa ndị ọzọ na-agbasa mgbasa ozi mmekọrịta maka uru nke ha. Pagemodo ewepụtala infographic na Otu ndi ahia si eji Social Media aga nke oma. Ihe omuma ihe omuma a dabere na nyocha ohuru ma gosiputa uru ndi ozo di na iji mgbasa ozi. Gụnyere:
Olee otú dị mkpa mgbasa ozi mgbasa ozi maka obere ulo oru?
Kedu pasent nke ikpughe obere azụmaahịa na-enweta site na mgbasa ozi
nke ihe na-ebute nsonaazụ kachasị
Tags: infographicpagemodoobere azụmahịaelekọta mmadụ mediansonaazụ mgbasa ozi mmekọrịta
Ebumnuche 3 M na-akwado Webinar m na ReadyTalk
Mee 2, 2012 na 5: 28 PM
Ihe na-eju m anya oge niile bụ enweghị ojiji nke ngwa ngwa Geolocation. Ekwenyere m na ọ bara nnukwu uru na ọkwa mkpọsa, na-eme ka ebumnuche ndị ahịa na-egwu egwuregwu. Amaara m na ọnụego nkuchi na ọkwa ndị ahịa ka dị ala mana anyị ga-ahụ na ịgbasa na afọ ndị na-abịanụ na ịrị elu nke Mobile.
Mee 2, 2012 na 5: 33 PM
Nnukwu ihe, @ twitter-281224701: disqus! Asusu di na nkwuputa gi bu na otutu otutu ndi a nwere ike irite uru site na ngwa ndi ozo di iche-iche karia ihe omuma ihe omuma. Mpaghara dị oke mkpa maka obere azụmaahịa ọ bụla!
Mee 2, 2012 na 7: 59 PM
Aghọtaghị m ihe kpatara na ewepụrụ Google niile na "atụmatụ iji".
You chere n'ezie na ọ dịghị mkpa ma ọ bụ na ọ gaghị ewe nnukwu ohere n'afọ ọzọ?
Mee 2, 2012 na 9: 42 PM
@ google-3edd56e2ef9c5b26e450ffc79d099b0e: disqus - amaghi ihe kpatara eji eleghara ya anya na nke a, Vane. Mana anyị chere na ọ dị mkpa, ọkachasị ebe Google+ nyere onyinye maka azụmahịa iji jikọta edemede na mbipụta. Anyị emeela ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa na ndị ahịa anyị ka anyị tinye ya ọnụ.
Mee 3, 2012 na 1: 07 PM
Na-akpali. O juru m anya na enweghi uzo ma mana m chere na nke a bu ihe banyere 'umuaka nwoke'? Ọ dị mma ịkekọrịta, daalụ.
Mee 7, 2012 na 10: 28 AM
Chọpụta ya na-akpali mmasị na Google hapụrụ. Google+ abụghị naanị netwọkụ mmekọrịta. Dị ka ngwaahịa Google ọ nwere mmetụta na ọchụchọ ma kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ndị ahịa na-achọ ụzọ iji melite ọnụnọ njin ọchụchọ ha.